Degso Security Barnaamijyada loogu talagalay Windows
Degso Security Barnaamijyada
Codsiga TuneUp AVG Web wuxuu ka mid yahay codsiyada aad u adeegsan karto inaad ka dhigto daalacashada internetka mid aamin ah oo muhiimad siisa asturnaanta adeegsadaha. Codsiga biraawsarka, kaas oo ka hortagaya hanjabaadaha kombiyuutarkaaga kaga imaan kara intarneedka intaadan gelin shabakadaha, ayaa sidaas ku tusaya heerarka halista ee...
Daraasiin barnaamijyo kala duwan ah oo qatar ku ah kombuyuutarradeena, sida fayrasyada, dixirigga, spyware, iyo waliba malware, nasiib darro waxay sababi karaan cawaaqib xumo sida xog luminta, maadi iyo anshax xumo, aad ayeyna ugu adag tahay dadka isticmaala inay iska caabiyaan dhammaantood iyagoo adeegsanaya kaliya hal antivirus. ...
Windows 10 Xakamaynta Firewall waxay u taagan tahay softiweer amni oo aad ku adeegsan karto kombiyuutarrada desktop -kaaga. Macluumaadkaaga waxaa lagu xafidaa aaladdan xoogga leh ee kaa caawineysa inaad ammaan ku ahaato internetka. Qalab fudud oo dhammaystiran, Windows 10 Xakamaynta Dabka waa barnaamij aad kula socon karto...
Adigoo adeegsanaya Qalabka Ransomware Screen Lock Screen ee Trend Micro, waxaad nadiifin kartaa qalabka madax furashada ee kaa hor istaagaya inaad gasho nidaamkaaga. Ransomware waa softiweer xaasidnimo ah oo kaa hor istaagaya inaad gasho nidaamkaaga ama faylashaada, kugu qasba inaad lacag bixiso. Barnaamijyadan xaasidnimada ah ee...
Adoo soo dejinaya Kaspersky Security Cloud 2021 waxaad heleysaa barnaamijka amniga ugu horumarsan ee Kaspersky. Kaspersky Security Cloud, oo ah barnaamijkii ugu horreeyay ee la-qabsiga ah ee amniga, waxaa ka mid ah Amniga Internetka (Amniga Internetka), Iskuxirka Sugan (VPN), Maamulaha Furaha (Maamulaha Furaha), Nabadgalyada Live...
Fiditaanka Internet -ka, waxay noqotay arrin xiiso u leh waalidiin badan, oo ah bogagga ay carruurtoodu booqdaan marka ay waqti ku qaataan kombiyuutarka. In kasta oo ay jiraan waxyaabo waxtar leh oo ku jira internetka, joogitaanka waxyaabaha waxyeellada leh ayaa ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhibka badan ee waalidiinta xilligan....
Waxaa laga soo saaray khayaanada iyo fayrasyada, Dev Secure wuxuu naga ilaaliyaa waqtiga dhabta ah isagoo leh gaashaan -ka -hortag ka dhan ah aaladaha dibadda sida USB, CD iyo boosaska kaarka. Sidoo kale ka -hortagga dhammaan khataraha, waxay bixisaa badbaadin buuxda iyadoo la ogaanayo exe, fayrasyada iyo gooryaanka sida Autorun,...
Codsiga Spybot Anti-Beacon, waxaad ku qaadan kartaa taxaddarrada lagama maarmaanka u ah asturnaantaada adiga Windows 10 kombiyuutarrada nidaamka hawlgalka. Microsoft waxay noo oggolaaneysaa inaan si otomaatig ah ugu dirno warbixinno khalad ah server -yada si loo xalliyo arrimaha waxqabadka kala duwan, khaladaadka, shilalka iyo in ka...
Tirtirku waa softiweer bilaash ah oo awood leh kaas oo aad ku abuuri karto meel lagu kaydiyo oo dheeraad ah adiga oo tirtira faylasha aan loo baahnayn ee ku jira dariiqaaga adag. Markaad maamusho barnaamijka, oo leh is-dhexgal user-saaxiibtinimo leh, ka dib markii aad ku rakibtay kombiyuutarkaaga markii ugu horreysay, barnaamijku wuxuu...
PrivaZer waa barnaamij caqli badan oo labaduba ilaaliya amniga kombiyuutarka isla markaana hagaajiya xawaareheeda iyagoo ka saaraya khayaanada. Waxay soo jiidataa fiiro gaar ah maadaama ay tahay adeegsi fudud si loo baaro dhammaan noocyada kala duwan ee codsiyada sidoo kale nadiifiya xogtaada daalacashada internetka oo ka saarta...
Sisma waa aalad maareyn sir ah oo awood leh oo aad ku adeegsan karto kombiyuutarrada desktop -kaaga. Adigoo wata Sisma, waxaad si fudud ugu kaydin kartaa dhammaan furahaaga sirta ah oo aad isla markiiba abuuri kartaa furayaal sir ah. Sisma, oo gabi ahaanba bilaash ah, waa aalad leh heerar sir ah oo xoog leh oo 256-bit ah waxayna bixisaa...
Barnaamijka Autorun Injector waa codsi bilaash ah laakiin waxtar leh oo kuu oggolaanaya inaad si buuxda u maamusho Autorun, taas oo ah, faylasha otomaatiga ah ee cajalladaha USB -ga ee aad ku xirto kombiyuutarkaaga. Barnaamijka, oo laga diyaariyey cabashooyinka ah in cajaladaha adeegsadayaasha aaladaha flash -ku ay inta badan ku dhacaan...
ZHPCleaner waxaa lagu qeexi karaa barnaamijka nadiifinta biraawsarka oo aad isticmaali karto haddii xakamaynta biraawsarkaaga wax laga beddelay. ZHPCleaner, barnaamij ka saarista fayraska biraawsarka oo aad ka soo dejisan karto oo aad si bilaash ah ugu adeegsan karto kombiyuutaradaada, asal ahaan waa barnaamij loogu talagalay in lagu...
Norton Power Eraser waa barnaamij lacag laaan ah oo ku daraya nidaam dheeri ah oo nabadgelyo ah nidaamkaaga, kaasoo siinaya difaac adag oo ka dhan ah hanjabaadaha kombiyuutarka. Waad ku mahadsan tahay barnaamijka xiisaha leh ee adeegsadaha-saaxiibtinimo leh, wax dhib ah ma yeelan doontid xitaa haddii aad markii ugu horreysay...
ChrisPC Proxy Anonymous Proxy waa codsi si sahlan loo adeegsan karo oo awood badan oo u saamaxaya dadka isticmaala inay si qarsoodi ah u dhex maraan internetka. Isticmaalayaasha guryaha ee raadinaya nabadgelyo iyo asturnaan dheeraad ah ayaa si badbaado leh u isticmaali kara ChrisPC Proxy Anonymous Proxy, oo ah software lacag laaan ah,...